China SSAW Spiral Welded x42 Steel Pipe Warshada iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Tuubbada alxanka leh waxaa lagu sameeyaa iyadoo la rogo fiilada birta ee birta qaab dhismeedka yar ee kaarboonka ama birta qaab dhismeedka alloy hoose ee tuubo bannaan iyadoo la raacayo xagal helix gaar ah (oo loo yaqaan xagasha samaynta), ka dibna alxanka kala-goysyada tuubooyinka.Waxay soo saari kartaa tuubooyinka birta dhexroorka weyn ee xariijimaha birta dhuuban.
1) Fasalka: Q235B (U dhiganta St37.2, S235JR, ASTM A36),Q345B (oo u dhiganta St52.3, S355JR), 0Cr13,1Cr17,00Cr19Ni11,1Cr18Ni9,0Cr18Ni11Nb,16Mn,20#,Q345,L245,L290,40#,60#,X42,X46,X70,X80
2) Dhexroorka dibadda: Φ273mm-2420mm
3) Dhumucda gidaarka: 5mm-22mm
4) Dhererka: 6m / 12m (Waxaan hagaajin karnaa dhererka sida codsigaaga
Dhumucda darbiga magaca ahaan mm
(1) Tuubooyinka birta ah ee dhexroorkoodu kala duwan yahay waxaa lagu soo saari karaa iyadoo la isticmaalayo birta xariijimaha ah oo isku ballac ah, gaar ahaan tuubooyinka birta ah ee dhexroorka weyn leh waxaa lagu soo saari karaa bir cidhiidhi ah.
(2) Isla xaalad cadaadis la mid ah, walbahaarka alxanka wareega ayaa ka yar kan alxanka tooska ah, kaas oo ah 75% ~ 90% kan tuubada alxanka tooska ah, sidaa darteed waxay qaadi kartaa cadaadis weyn.Marka la barbardhigo tuubada tooska ah ee welded leh dhexroorka dibadda, dhumucda derbiga waxaa lagu dhimi karaa 10% ~ 25% cadaadis isku mid ah.
(3) Cabbiradu waa sax, guud ahaan dulqaadka dhexroorku wuxuu ka yar yahay 0.12%, leexashadu waxay ka yar tahay 1/2000, ugxantu waa wax ka yar 1%, markaa hababka cabbirka iyo toosinta guud ahaan waa laga saari karaa.
(4) Wax soo saar joogto ah waa suurtagal.Aragti ahaan, tuubooyin bir ah oo aan dhammaad lahayn ayaa la soo saari karaa.Luminta madaxa iyo dabada waa yar tahay, heerka isticmaalka birta waxaa lagu kordhin karaa 6% ~ 8%.(5) Marka la barbardhigo tuubada tooska ah ee alxanka ah, waa dabacsanaan xagga hawlgalka, waxayna ku habboon tahay beddelka noocyada iyo hagaajinta.
(6) Qalabka miisaanka fudud iyo maalgelinta bilowga ah oo yar.Waxaa laga dhigi karaa unug guurguura oo nooca trailer ah si ay si toos ah u soo saaraan tuubooyinka alxanka ah ee goobta dhismaha ee tuubooyinka la dhigay.
(7) Way fududahay in la garto makaanaynta iyo farsamaynta.
Tuubooyinka alxanka leh ayaa inta badan loo adeegsadaa injineernimada biyaha tuubada, warshadaha petrochemical, warshadaha kiimikada, warshadaha korontada, waraabka beeraha iyo dhismaha magaalooyinka ee Shiinaha.Waxaa loo isticmaalaa gaadiidka dareeraha ah: sahayda biyaha iyo qulqulka.Gaadiidka gaaska: Gaaska dhuxusha, uumiga iyo gaaska dareeraha ah.Loo isticmaalo qaab dhismeed: loo isticmaalo sidii tuunbada wadista iyo buundada;Dhuumaha maraakiibta, waddooyinka iyo dhismayaasha dhismaha, iwm.